UKobo Elipsa, umfundi we-e-hybridi ngoku oquka incwadana [Uhlalutyo] | Zonke iReaders
UKobo Elipsa, umfundi we-e-hybridi ngoku oquka incwadana yamanqaku [uphononongo]
UMiguel Hernandez | | I-eReaders, isibulali
UKobo ubonakala ezimisele ukuqhubeka nokubonelela ngezinye iindlela, umoya omtsha kunye nokuhlaziya apho ezinye iimveliso ze-e-book zibonakala zimile iminyaka emininzi ngoku. Ke ngoko, asibhengezi ngovuyo olukhulu zonke iintlobo zeendaba ukuba ezi ntlobo zezixhobo zifumana ixesha elingaphezulu. Kutshanje sikuxelele malunga neKobo Elipsa, isixhobo esiyi-hybridi apho uKobo afuna ukuvuselela umxholo we-e-Reader.
Sijonga nzulu iKobo Elipsa entsha, incwadi ye-e ethi ngamanye amaxesha ijike ibe yincwadi yokubulela ngenxa yesitayile esinomdla kunye neenoveli ezininzi zobugcisa. Fumanisa nathi ngokunzulu le Kobo Elipsa entsha kunye namandla ayo onke, kunye nobuthathaka bayo kunjalo.
Ngeli xesha besifuna khapha uhlalutyo kunye nevidiyo yoogxa bethu kwiActualidad Gadget apho uya kukwazi ukubona ukungabhalwa kwesixhobo, imixholo yebhokisi kunye nokuqala kokuvela ngokukhawuleza. Sicebisa ukuba uyijonge.
1 Uyilo: Umxube phakathi kwentuthuzelo kunye nohlanganiso
3 Ukuzimela kunye namava ombono
4 Isikhuselo sokulala kunye neStylus, izixhobo ezimbini ezitshintsha yonke into
Uyilo: Umxube phakathi kwentuthuzelo kunye nohlanganiso
Isixhobo esitsha seKobo, njengesiqhelo, senziwe ngeplastikhi emnyama engagxothwanga kwiminwe kwaye ngenxa yoko ilula. Oku kuguqulela kubunzima obupheleleyo be-383 iigrem, into elula kakhulu kwimveliso elinganisa i-193 x 227,5 x 7,6 yeemilimitha. Isinika iscreen esijikeleze i-intshi ye-10,3, elingana phantse nelincwadana. Ukongeza, siyifumene inomdla wokuba umqolo unothotho lweepads zokuxhasa isixhobo ngokubhaliweyo, ngendlela efanayo nelinye lamacala licekeceke kunelinye. Icala "elijiyileyo" lilapha kanye apho izakubakhona khona i-USB-C, kunye neqhosha ekuphela kwalo eliquka ukuvuka nokukhiya isixhobo, njengezinye iincwadi zikaKobo.
I-Kobo Elipsa ikhululekile kuthi kwiintsuku ezinde zokufunda, ukunyaniseka simangalisiwe kukukhanya okunikwe ubungakanani, nangona kunjalo, kufuneka sitsho ukuba izinto ziyatshintsha ukuba sisebenzisa imeko kunye nepensile, apho ubunzima buza yonyuswe ngokubonakalayo. Kwangokunjalo, sicebisa ukuba siza kuyisebenzisa kuphela ekufundeni, siyisebenzisa ngaphandle kwekhava yokulala, oko kukuthi, kuphela ngekhava yerabha, ukusisindisa ezinye iintlungu zengalo. Kukwenzeka okufanayo ngobukhulu bescreen sayo, njengoko inefreyimu esecaleni esekunene, iya kusivumela ukuba sifunde ngaphandle kokufumana umda kwizikhundla.
UKobo usebenze kangangoko kunokwenzeka ngemida yezobuchwephesha, ethi nangona inganikeli ukuthunyelwa kwezixhobo ezingaqhelekanga, simangalisiwe sisiphumo sokugqibela. Ngokubhekisele kwiscreen, sinepaneli I-E-Ink I-1.200 ye-10,3 ye-intshi, iyonke i-26,16 intshi, isinika isisombululo se-227 DPI kunye ne-1404 x 1872 kwi-ratio yayo.
Kwinqanaba lememori yangaphakathi siya kuyonwabela kungekho ngaphantsi kwe-32 GB, ukuba ngaphandle kokujonga ngaphezulu ngokwaneleyo kwincwadi ze-elektroniki, kwaye kunjalo, inokuhlengahlengiswa ukuba sisebenza kwiiPDF kunye nokwenza kwethu iincwadi zamanqaku (esiza kuthetha ngazo kamva).
Konke oku kushukunyiswa yinkqubor multi-core ukuya kuthi ga kwi-1,8 GHz UKobo unyukile, eqhuba inkqubo yokusebenza engaphantse ibe notshintsho, ngakumbi ukuba siyayithelekisa neenguqulelo zangaphambili ezinje ngeAura, apho badibanisa nje icandelo elitsha "leeNcwadi". Sine-1 GB yememori ye-RAM ehambisa iNkqubo yokuSebenza ngokulula kwaye ikhatshwa ngamanqanaba amahle okunxibelelana anje I-Wi-Fi kunye nezibuko le-USB-C.
Ukuzimela kunye namava ombono
I-Kobo Elipsa inyuka ngaphakathi kwebhetri ye-2.400 mAh, Ayonto imbi kwaphela ukuba sijonga ukuba yincwadi ye-elektroniki, ngakumbi ukuba sinokunyuka kokukhanya kwescreen sokuKhanya kweKobo Comfort ukuya kuthi ga kwiipesenti ezilishumi ngaphezulu. Ukuzimela kuya kuxhomekeka ikakhulu ekusebenziseni kwethu iStylus kunye nokuqaqamba kwesibane, ngekhe sakwazi ukuyisebenzisa kwaye khange sikubone ukwehla okubonakalayo kwebhetri kunaso nasiphi na esinye isixhobo seKobo ukuba sithetha ngokufunda iincwadi kuphela.
Isikrini ebesikhe sathetha ngaso ngaphambili, siphucule ngokubonakalayo ngokukhanyisa, enyanisweni, Le 10% ephezulu ayimfuneko ekujongeni umxholo ngaphandle kwaye ndingaphantse ndithi kubonakala ngathi kugqithisile kum, njengoko inokude idinwe kuthi. Inyani yile yokuba kule Kobo Elipsa sifumana okubonakala kum njengokukhanya kokona kulungileyo. Ukuthatha ithuba lokuSebenza ngokuKhanya kweNduduzo kunye neNqubo yoBusuku sinokuphucula ukunyamezelana kwethu nokufunda kwiimeko ezibi zokukhanya.
Isikhuselo sokulala kunye neStylus, izixhobo ezimbini ezitshintsha yonke into
Ipakethi ehlalutyiweyo, esele ithengisiwe kwiwebhusayithi yeKobo, iya kongeza iSigubungelo sokulala, isiciko esiya kuthi kuqala sisebenze njengokukhusela i-Elipsa yethu ngaphandle kobunzima obuninzi, kwaye apho singongeza khona "umkhusane" Iyakusebenza njengenkxaso yesitayile kunye ne-Elipsa ukuba sifuna ukusebenza kuyo. Umgangatho wesikhumba ofanayo osetyenziswe kuluhlaza kuvavanyo kuyamangalisa, kunye nokufakwa lula. Ndothuswa kukuba ipensile inokusikhapha ngokulula kwiNdawo yokulala. Ndifumanise ukuba yinto entle kwaye emnandi ukuyisebenzisa, nangona besesitshilo ngaphambili, ukuba siza kufunda rhoqo, eyona nto ilungileyo kukususa "umkhusane" kuKhuselo Lokulala oluthintela ngokuzenzekelayo kwaye lusebenze i-Kobo U-Elipsa xa uyibeka kwaye uyikhupha.
Ngokwenxalenye yayo, iStylus sisixhobo esilula esiya kusebenza kwiibhetri kunye nokuzimela kwethu esingakwaziyo ngoku okwangoku. Ibhetri ebandakanyiweyo ikwibhokisi enye (into ekufuneka uyixabisile), kwaye le inesayizi esemgangathweni, ikhululekile kwaye ilula. I-nib iyakwazi ukubuyisela endaweni kunye noxinzelelo ekuphenduleni, ukuhambisa iziphumo ezichanekileyo ngaphandle 'kokufaka igalelo' kwescreen seinki ye-elektroniki. Yiyo loo nto sinamaqhosha amabini achanekileyo asebenze ngokwahlukeneyo kwisitayile ngokwaso kwaye esivumela ukuba sihlele iiPDF, senze ezethu iincwadi zeencwadana kwaye sibhale ngqo kwincwadi esiyifundayo.
Amava am okufunda ngeKobo Elipsa abelungile, nangona mhlawumbi le yi-e-ncwadi enkulu kakhulu ukuba siza kuyisebenzisa ukuyifunda. Kwelinye icala, Sine-hybridi enezixhobo ezinje ngesigqubuthelo kunye nokubanakho kokusebenzisa ithuba lesitayile esenza ukuba ibe sisixhobo esirhangqileyo ngokufanelekileyo. Imveliso engagxili kumsebenzisi oqala ngeencwadi zombane, kodwa ezinokuba luncedo kunye nabasebenzisi esele beqhelene nayo.
Ipakethi epheleleyo ebandakanya iStylus kunye neNdawo yokulala
Okokuqala i-hybrid epheleleyo kwintengiso
Uluvo olwahlukileyo ukuza kuthi ga ngoku kwintengiso
Inqanaba elifanelekileyo lokuhlaziya leCarta 1200 entsha
Isifundo esazisa kwi-UI asikho
Impendulo ekhawulezileyo ngakumbi iyafuneka kwi-OS
Umendo opheleleyo kwinqaku: Zonke iiReaders » isibulali » I-eReaders » UKobo Elipsa, umfundi we-e-hybridi ngoku oquka incwadana yamanqaku [uphononongo]
UKobo usibonisa 'amathumbu' eKobo Elipsa
UKobo Elipsa, i-eReader entsha enobungakanani bephepha